४० बर्षिया महिलाको ब्य’था- बिहेअघि कुमारी नै थिए त्यो मेरो विवाहको पहिलो रात थियो सत्य कथाः – Wow Sansar
January 20, 2021 154
त्यो मेरो विवाहको पहिलो रात थियो । म पहिलो पटक कुनै पुरुषको अँगालोमा बाँधिनु पर्ने थियो । बिहेअघि नै मैले यो रातको बारेमा नजिकका साथीहरूसँग कुरा गरेकी थिएँ ।
त्यो देख्दा मलाई ई’र्ष्या लागेर आउँथ्यो त्यो घट’नाले मलाई निकै दुखित बनायो । मेरो कल्पनामा थियो । जब म कोठाभित्र पुग्ने छु अनि तत्कालै मेरा पतिले मलाई बलियोसँग समात्ने छन्, मेरा शरीरभरि चु’म्बन गर्ने छन् तथा हामी सौम्य तरिकाले रातभरि मायामा बाँ’धिने छौँ ।
तर वास्तविकता फरक थियो, म कोठोमा आउनुअघि नै मेरा पति निदाइ सकेका थिए । त्यस बेला म ३५ वर्षकी थिएँ र कुमारीत्व पनि गुमाएकी थिइन ।
मेरो पतिको व्यवहार पी’डादायक थियो ।म कलेजमा पढ्दा र कार्यालयमा जाँदा धेरै केटा–केटीहरू गहिरो मित्रतामा बाँ’धिएका देखिन्थे ।
उनीहरू आफ्ना मित्रको काँधमा शिर राखेर थकाइ मेटाइ रहेका हुन्थे, हातमा हात राखेर हिँडिरहेका हुन्थे । त्यो देख्दा मलाई ई’र्ष्या लागेर आउँथ्यो ।
के म पनि आफ्नो जीवनमा त्यस्तै साथीको खोजीमा त थिइन ?महिलाले गरेका साना गल्तीलाई पनि यो समाजले ठुलो बनाएर प्रचार गर्छ तर पुरुषको ठुलो गल्ती हुँदा पनि महिलालाई त्यो गल्तीको भागीदार बनाइन्छ ।
कस्तो वि’डम्बना ?मेरो परिवार ठुलो थियो । ४ दाजुभाइ एक बहिनी अनि बुढा आमा–बाबा । तर, म एक्लो महसुस गरिरहेकी थिएँ ।के अब म सधैँका लागि एक्लै बस्ने ?के कुनै दिन मेरो कुमा-रीत्व भ-ङ्ग हुन्छ होला ?
यस्ता प्रश्नहरूले सधैँ मेरो मस्तिष्कलाई त-नाव दिइरहेका हुन्थे मेरा सबै भाइबहिनीहरूको बिहे भइसकेको थियो । उनीहरूको आफ्नै परिवार थियो ।
एकाङ्की जीवनका कारण कहिले काहीँ मेरो मन साह्रै दु’ख्थ्यो पनि ।अनि कसैको मायाका लागि त’ड्पिन्थ्यो पनि । तर, मेरा वरिपरि एकान्त बाहेक केही थिएन ।
कहिले काहीँ लाग्थ्यो, यी सबै दुखका पछाडि कतै म मोटी हुनु त कारण छैन ? के पुरुषले मोटी महिलालाई मन पराउँदैनन् ?
मैले सोचेँ पुरुषहरू महिलाभन्दा अलि कमै बोल्ने हुन्छन् । शालीन हुन्छन् ।अनि मलाई लाग्यो, मेरो हुनेवाला पति पनि त्यस्तै होलान् ।
तर, बिहे भएको पहिलो रातमा म द्वि’विधामा परेँ तथा मैले थाहा पाउन सकिन,
किन उसले त्यस्तो रू’खो व्यवहार देखाइ रहेको थियो भनेर । जब भोलिपल्ट मैले उसलाई सोधेँ, अनि उसले आफूलाई अलि सन्चो नभएको बतायो ।
Prev८० लाख रुपैयाँ लिएर साना किसान समूहकी अध्यक्ष फरार!
Nextथाहा छ ? शरीरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी
७ घण्टा मस्तसँग सुतेर ट्याक्सी ड्राइभरले कमाए १८ लाख !
माइतीमा बस्दै आएकी पत्निले इन्जिनियर पतिलाई जेल पुर्याईदिइन्
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (4000)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3459)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1480)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1232)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1176)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1141)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1119)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (1034)
Exclusive: नेपालको झण्डा जलाएर प*क्राउ परेका ग्याल्जेन छुटेपछि पहिलोपटक मिडियामा | खोले बास्तबिकता (भिडियो हेर्नुहोस्)
साताको पहिलो दिन पनि ह्वातै घट्यो सुनको मूल्य , यस्तो छ आजको बजार मूल्य